Lozan’ny fananana iombonana - Wikipedia
Ny saha iombonana nampiasain’ny olona miompy biby nandritrin’ny Andro Antenantenany tany Eoropa.
Ny lozan’ny fananana iombonana (The Tragedy of the Commons) dia karazana zava-mitranga rehefa mampiasa ny fananana iombonana tsy misy fetra ny olona maromaro. Manao izay mahasoa azy izay mba handany na hanimba ny fananana iombonan’ny olona rehetra; na dia fantatr’izy ireo aza fa tsy hisy tombontsoa ho an’ny ho aviny izany. Tamin’ny taona 1968 dia nazavain’ny mpanoratra Garrett Hardin voalohany tamin’ny gazety “Siansa” ity loza ity. Ny lozan’ny fananana iombonana dia isan’ny teorian’ny filalaovana sy azo ampitahana amin’ny safidy manadala an’ny mpigadra.
Ny famelabelaran’i Garrett Hardin[hanova | hanova ny fango]
Nanoratra momba ny olan’ny fitomboanan’ny isan’ny olombelona sy ny loharanon-karena voafetra eto an-tany i Garrett Hardin. Naneho ny ohatra ny saha iombonana nampiasain’ny olona miompy biby nandritrin’ny Andro Antenantenany ("Moyen Âge" amin’ny teny frantsay) tany Eoropa. Te hampitombo foana ny isan’omby misy amin’ny andiany ao amin’ny saha iombonana ny mpiompy mba hahazo tombony be kokoa. Nefa, tamin’ny fanampiana isaky ny omby dia nisy lafitsara sy lafiratsy:
Lafitsara : Nahazo tombontsoa isaky ny omby nampina.
Lafiratsy : Nanimba kely kokoa ny saha isaky ny omby nampina.
Koa, tsy mizara mitovy ny tombontsoa sy vokadratsy ireo mpiompy; mahazo ny lafitsara rehetra ny mpiompy tokana fa mizara ny lafiratsy ny mpiompy rehetra. Noho izany, tokony hiezaka hanampy omby ny mpiompy tokana mazava saina. Fa mazava saina ny mpiompy rehetra ka vetivety dia lasa misy omby be loatra eny an-tsaha. Simba ny saha ary tsy maniry intsony ny bozaka ho an’ny omby rehetra.
Fananana iombonana ankehitriny[hanova | hanova ny fango]
Misy olana maromaro ankehitriny manana fifandraisana amin’ny lozan’ny fananana iombonana, ohatra: ny soson-drivotra, rano, trondro, sy akora misy fetra (ohatra solika na arintany).
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Lozan’ny_fananana_iombonana&oldid=966321"
Voaova farany tamin'ny 20 Febroary 2019 amin'ny 18:56 ity pejy ity.